Vietnam bụ mba kachasị ọhụrụ machibidoro ụgbọ elu China
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Vietnam bụ mba kachasị ọhụrụ machibidoro ụgbọ elu China
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Ndị ọchịchị Vietnamese kwupụtara mmachibido iwu na ụgbọ elu na-aga na China n'ihi ihe egwu nke mgbasa nke nje Corona 2019-nCoV. Site na elekere 9:00 nke ụbọchị Febụwarị 1, ikike niile maka ụgbọ elu na-aga China na Vietnam akagbuo. Na mbu, mpaghara Vietnamese nke Quang Nin mechiela oke ala na China iji gbochie mbata nke ndị mmadụ bu coronavirus.
Ugbu a, n'ọdụ ụgbọelu nke ọtụtụ mba, a na-elebara ndị si China ọbịa anya pụrụ iche. Ndị dọkịta na-elezi ha anya nke ọma maka ọrịa coronavirus. Iji maa atụ, na Russia, ebugharịrị ụgbọ elu niile si na China na ọdụ ọdụ F dịpụrụ adịpụ na Moscow Sheremetyevo Airport.